Fahalalahàna miteny · Aogositra, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Aogositra, 2021
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Aogositra, 2021
Azia Afovoany sy Kaokazy 31 Aogositra 2021
Hatramin'ny 2019 nametrahan'i Nazarbayev ny fialàny, nisy hetsika fanoherana vaovao teraka tao Kazakhstana nisafidy ny arabe ho toerana fiadiana. Tamin'ity indray mandeha ity dia trano fampiasan'ny daholobe ao Almaty no lasibatra.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 27 Aogositra 2021
Takian'ny lalànan'ny famangitana lahatahiry, nolaniana tamin'ny taona 2015, ny orinasan'aterineto rehetra mikirakira lahatahirin'ny mpisera rosiana hitahiry izany lahatahiry izany amin'ny boatin-drakitra (servers) hita maso miorina ao anatin'i Rosia.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 26 Aogositra 2021
"Ary amin'ny lisitry ny kasinga vahiny, amin'izao fotoana izao ahitana olona maotina maro dia maro sy ranty toa izany koa ao izay manjary mahamenatra fotsiny izao ny tsy maha-ao anaty lisitra anao."
Ny ratsy ateraky ny sivana mahazatra
Hong Kong (Shina) 25 Aogositra 2021
Sarina mpanao hetsipanoherana am-pilaminana, tsy mifanaraka amin'ilay fitantaràna izay manohy mandoko ireo mpanao hetsipanoherana ho olona mahery setra, tsy misaina, entin'ny fo.
‘Mitaky fahafahana 100 isanjato aho’ — Nandao an'i Hong Kong honina any Taiwan ny artista ara-politika iray noho ny famoretana
Azia Atsinanana 24 Aogositra 2021
Notadiavin'i Wong ny hanosehana ny fetran'ny zavakanto ho fomba hananan-kevitra hafa eny an-dalambe ary nanaraka tsy tapaka ny hetsika fanohanana demaokrasia 1 jolay izy
Amerika Latina 23 Aogositra 2021
Hatrany Cuba ka hatrany Colombia sy Guatemala—firenena samy manana ny toe-draharaha politikany—nidina an-dalambe tao ho ao ny vahoaka mitaky fiovana. Inona ny zavatra iraisan'ireo firenena ireo?
Azia Atsimo 22 Aogositra 2021
Nandrisika ny vehivavy hanao fihetsiketsehana manerana an'i Pakistan mba hanairana ny saina momba ny olan'ny vehivavy ny Diabe Aurat. Tamin'ny taona (2020), nisedra fandrarana noho ny fangatahana fa "manohitra ny Islamo" ity hetsika ity.
Nopetahan'ny fitsarana Belarus ho “extremiste” ny seha-mpampitam-baovao mahaleotena Tut.by, Zerkalo.io
Eoropa Afovoany & Atsinanana 20 Aogositra 2021
Ny didy dia mihatra amin'ny singam-botoaty tsirairay ao amin'ny tranonkala, sy ny votoaty rehetra naranty tao amin'ny fantsona media sosialiny.
Amerika Latina 19 Aogositra 2021
Mifangarika amin'ny fitobahan'ny vaovao diso sy ny fanelezana tsaho mandifotra ilay faritra ny tsy fahampian'ny torohay azo itokiana momba ireo olana saropady, tafiditra amin'izany ny ady atao amin'ny COVID-19.
Azia Atsinanana 18 Aogositra 2021
"Manahy ny fiantraikan'ny fisamborana azy amin'ny asa fanaovan-gazety izahay, izay tsy mbola nampanahy toy izany hatramin'izay."